Maitiro ekupasa bvunzo usina kudzidza? | Kuumbwa uye kudzidza
Maite Nicuesa | 15/05/2021 23:51 | Matipi
Kupasa bvunzo usina kudzidza zvachose hapana chiitiko chisingaite. Nekudaro, zvinogona kuitika kuti iwe hauna kudzidza zvakanyanya sezvawaizoda. Uye, kunyangwe usina kuzvigadzirira zvakakwana bvunzo, unogamuchirwa. Kune mhando dzakasiyana dzebvunzo. Ivo vane fomati Type bvunzo Ivo vane mukana wekuti ivo vanopa mhinduro chaiyo kubva kune akati wandei sarudzo dziripo. Unogona kuedza kuburitsa ruzivo uchishandisa yako kufunga. Mukudzidzisa uye Zvidzidzo tinokupa matipi mashanu anoshanda.
1 1. Tora mukana wenguva mukirasi
2 2. Sarudza izvo zvakakosha zvakakosha
3 3. Zvirongwa uye pfupiso
4 4. Simbisa chidzidzo mukumira kwekupedzisira
5 5. Kuverenga kunzwisisa
6 6. Edza
1. Tora mukana wenguva mukirasi
Uku kutarisisa kwakakosha sezvo kuri mumuitiro wekirasi uko kwakawanda kwekudzidza kunoitika. Tora zvinyorwa uye nyora pasi kana iwe uchifunga kuti zvakakodzera. Chii chimwe, bvunza mudzidzisi chero mibvunzo yauinayo. Zvichida kusahadzika ikoko kune mumwe waunodzidza naye. Uye, nekudaro, mhinduro yemudzidzisi inobatsira munhu wese aripo kuti anzwisise zvirinani chidimbu cheruzivo.
2. Sarudza izvo zvakakosha zvakakosha
Kana uine nguva shoma yekudzidza, nekuti zuva rebvunzo rinotevera rava kusvika, sarudza iwo akakosha mapoinzi uye tarisa paari. Sezvinei, inodzora dzimwe nyaya dzinogona kunge dziri dzebvunzo. Nekudaro, kana izvi zvikaitika, unogona kushandisa nzira iyi kurondedzera nguva iripo yekufunda kune iyo mibvunzo ingangodaro ingangopinda mune bvunzo.
3. Zvirongwa uye pfupiso
Pane musiyano mukuru pakati pekuziva zvese nezvenyaya uye kusaziva chero ruzivo. Naizvozvo, iwe unogona zvakare kurerutsa zvirimo uye nekuzvigadzira kuburikidza nekuzadzikiswa kwemadigiramu uye pfupiso izvo zvinokubatsira iwe kupfuura kunyangwe wakadzidza zvishoma. Usati waita pepa rehurukuro, tara chinyorwa. Maka nemuvara iwe waunoda, kana nepenzura, iwo akakodzera mazano. Uye shandisa iri ruzivo rwekumashure kugadzira hurukuro yakapusa gare gare.
4. Simbisa chidzidzo mukumira kwekupedzisira
Kusvika pamazuva ekutanga bvunzo usati wadzidza, zvinogona kuve chikonzero chaicho nei mudzidzi asarudza kusaedza. Uye zvakadaro pachine nguva yekuzvipa iwe mukana. Kudzidza pasi pekumanikidzwa ibasa guru. Uye zvakadaro, iwe unogona kuve nerombo rakaringana kuti ubvunzwe chimwe chinhu pabvunzo icho iwe chawakadzidza mune ino yekupedzisira kutambanudza.
5. Kuverenga kunzwisisa
Pane zvikanganiso zvekududzira izvo, kubva pakutanga, zviri kukanganisa mamiriro ekuti uwane mhinduro chaiyo. Naizvozvo, verenga ruzivo zvakanyatsonaka uye upe nguva yaunoda kumubvunzo uyu. Kwete yekuda kufambira mberi nekukurumidza, iwe uchapedza bvunzo kare. Chinhu chakakosha chaizvo kufambira mberi nhanho nhanho. Shandisa kufunga kwako kuti, kubva pane chirevo chemubvunzo, isa mhinduro. Mune zvimwe zviitiko, ungasanzwa senge wakagadzirira kuzviita. Asi zvinogona zvakare kuitika kuti iwe une nzira uye zviwanikwa zvekutaura mamwe emifungo mikuru mumashoko ako pachako.
Kutanga kupindura mibvunzo iri nyore kana iwo mapoinzi ayo iwe aunoziva mhinduro yacho. Usabatike mune izvo zviitwa zvinoita sezvakaoma.
Pese paunotora bvunzo, kunyangwe pawakagadzirira zvakakwana bvunzo, unowana imwe nhanho yekusava nechokwadi nekuti hauzive kuti ndeipi mibvunzo chaiyo ichave. Zvimwe unoziva shamwari yako iyo pane imwe nguva yakakwanisa kupasa bvunzo isina kudzidza. Izvi hazviite, kunyanya, muyunivhesiti iyo nhanho yekuoma kwezvidzidzo yakanyanya. Asi zvisinei neizvi, unogona kutora bvunzo uye woedza. Muchokwadi, chiitiko ichi chinogona kukupa iwe zvakakosha zvidzidzo zveremangwana. Ndokunge, chiitiko ichi chinogona kukubatsira kuti usadzokorora zvakafanana zvikanganiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Matipi » Maitiro ekupasa bvunzo usina kudzidza?
Chii chinonzi kurongeka